Idzva Martin Vrijland bhuku 'Icho chokwadi sezvatinozviona' chakagadzirira kutumirwa! : Martin Vrijland
Akaiswa mukati NEWS ANALYZES	by Martin Vrijland	musi wa4 November 2019	• 3 Comments
Yasvika nguva yekuti bhuku idzva 'Chokwadi sezvatiri kuzviziva' Nezuro ndakambopa vaverengi bhuku racho Ebook Reader (kana e-Reader kana uchida) uye mune PDF vhezheni. Kubva parizvino pepa rekuridziro bhuku rinowanikwawo kuburikidza ne webshop oshorajnees.nl yemutengo we € 24,95. Pazasi iwe unogona kuramba uchiita nhengo uye ugamuchire e-muverengi vhezheni uye uverenge iyo PDF shanduro. Hauna Ebook Reader? Zvino pane mazhinji maPC, malaptop kana i-pads iwe unogona kazhinji kungoverenga iyi Ebook Reader vhezheni. Kutaura chokwadi, ini ndinosanganisirawo iyo yePDF version kuti iwe ugone kuiverenga online pane yako kifaa chako chaunoda. Izvo zvinogoneka pane yako-Pad kana parunhare.
Iri bhuku rinopa pfupiso yakanaka yechokwadi nhema uye yakaunganidzwa Truman Show umo munhu anoitwa kuburikidza nehurongwa kubva kuberekwa kusvika paguva. Iri bhuku rinopa kutsanangurwa kwakadzama, asi pamusoro pezvose zvinouya nemhinduro yakajeka.
Wese munhu anopinda mafomu ekurongedza kubva kubeche kusvika paguva. Iri bhuku rinoratidza kuti chirongwa ichi chakagadziridzwa sei, magadzirirwo emagetsi akavakwa sei munyika uye kuti hunhu hunobatwa sei muunganidzwa Truman Show (mushure nefirimu rezita rimwechete kubva ku1998) mukudyidzana pakati pezvenhau, zvematongerwo enyika uye vanopokana vanoshora. Iyo inotsanangura chokwadi sezvatinozviona kubva kumuenzaniso yekumedzesera wemuenzaniso wakanangana neiyo 'kaviri slits kuyedza', huwandu hwefizikiki uye kubva pamaonero ekuziva. Chinofanirwa kune chero munhu anobatanidzwa mukuziva, chinamato, zvekunamata nezvematongerwo enyika.
Chinangwa changu chaive chekunyora bhuku rinogona kuverengerwa muzuva rimwe chete uye raunogona kupa kumhuri kana shamwari kuti uite kuti vafunge. Takabudirira. Iri bhuku rine 148 mapeji uye saka zviri nyore kuverenga pazuva.
Kana iwe watove nhengo yegore uye uchida kugamuchira bhuku iri pepa shanduro, ndapota nditumire email ine kero yako.
Pazasi unogona kudhawunira Ebook Reader vhezheni kana kuverenga yePDP version. Iwe unogona kuwana mafaera ese maviri mushure mekunge iwe wave nhengo. Kusvikira kunopihwa goridhe uye nhengo dzese dzegore. Chete kune iwo mitezo ndiwo mabatanidziro ebhuku pazasi kwechinyorwa ichi chinoonekwa. Vamwe vanoona bhatani renhengo. Paunova nhengo, iwe unonyatso saina semupi, uyo unonditsigira kuti ndienderere mberi nebasa rangu. Ndatenda zvikuru nekuda kweizvozvo!
Gadziridza 5 Mbudzi 2019, 15: 30 nguva: ikozvino unogona zvakare kuraira e-muverengi vhezheni uye iyo PDF kuburikidza ne webshop pasi pebhuruu bhatani.
Kana, semuenzaniso, iwe wakatsigira kuburikidza neapoira rekutumira kubhengi kana mwedzi pamwedzi nhengo uye iwe uchida kukwanisa kuverenga bhuku, ndapota taura nesu kuburikidza nefoni fomu. Icho chikonzero ini ndakaisa ichi chinodzvanywa ndechekuti vanhu vanogona kuverenga bhuku rangu re € 2 nekutanga kuve nhengo yemwedzi vobva vadzima iyo nhengo zvakare.
Tags: bhuku, de, ari, Featured, kennen, Martin, nyika yakasununguka, chokwadi, isu, akadai
Izvozvi ndinoda kukuropafadzai mukutsungirira kwako uye kuzvipira kushoko rakazvimirira
kuti waita kuti iwanikwe kune wese munhu ari mubhuku bhuku.
Mune maonero angu, iwe unoda chimiro chakasimba uye hukuru hukuru hwekupora
vasingazive vanonetswa vanhu kuratidza kuti vakadii vanoshungurudzwa uye kunyengedzwa ne
simba rekuchiva munyika ino uye kumwewo.
uye makorokoto nebhuku rako
Ini handina kuita zvese dambudziko re7 makore ndichimonera mutsipa wangu kunze uye nemazai ane mhepo haana kuzviisa pandiri. Pane kusapindirana ... izvo zvakandiisira mari yakawanda.
Ini handina kuzvinyorera bhuku iri, asi chaizvo uye chete kune vese vanhu avo vangada kuve nechimwe chinhu chekupa kune avo vamwe vanoziva mamiriro ezvinhu atiri.
Mhoroi Martin, makaraira kare bhuku renyu idzva.
Makorokoto uye kungoenderera mberi neruzivo! Izvo zvinongodiwa.
« Masangano evechidiki anorira alarm pamusoro pehasha nekuti 'hanya' ndiko kushungurudzwa chaiko.
Adobe, Twitter uye main media media vari kuenda kunorwa zvakadzika? »
Riffian op Nei VaTrump vasiri vanopikisa globalist asi imwe aristocracy pawn
SandinG op Nei VaTrump vasiri vanopikisa globalist asi imwe aristocracy pawn
Itai 1.688 vamwe vanyori